By Huawei 5G - teknụzụ ikuku na algorithm na-ekewaghị ekewa, usoro Wi-Fi 6 nke ngwaahịa nke Huawei AirEngine na-enyere ndị azụmaahịa aka ịmepụta Wi-Fi 6 netwọkụ na-ewepu oghere mkpuchi, na-enye ọrụ n'egbughị oge ma nweta enweghị ngwugwu mgbe ị na-agagharị. Nke a na-ahapụ ebe dị iche iche, yana ọdụ ụgbọ elu dijitalụ, agụmakwụkwọ dijitalụ, itinye ego ọ bụla, ọkaibe gọọmentị, nlekọta ahụike mara mma, na imepụta ihe mara mma, na-aga n'ihu na ọgbọ ụlọ akwụkwọ ikuku.
Huawei bụ onye na-ere ahịa kachasị igbasa ngwaahịa Wi-Fi 6 na ịbanye ha iji azụmaahịa. Ruo ụbọchị, Wi-Fi 6 Huawei AirEngine APs ejirila na mpaghara 5 gburugburu ụwa.
Dị ka onye na-eweta ngwa ngwa nkwukọrịta nkwukọrịta, Huawei enyela ọtụtụ ndị na-agba ọsọ LTE 4G na ndị na-eweta netwọkụ zuru ụwa ọnụ. Ọtụtụ n'ime ha na-enwetakwa nnukwu nguzo site n'aka ndị ahịa ikpeazụ dịka arụmọrụ dị elu & kwụ ọtọ. Site na oke arụmọrụ-ọnụego ruru, 4G wireless Huawei routers site na kaadị SIM & Ethernet ọdụ ụgbọ mmiri wee bụrụ ndị ama ama na Middle East, Asia, Europe, American areas & Africa. Ndị 4G Mobile Huawei Router na-ewu ewu karịsịa na ndị ahịa n'ihi ọrụ dị elu & ejiji ejiji nkecha na akpa akpa maka iji aga n'ihu.
Site na mgbasawanye nke netwọk LTE ikuku, Huawei nyere ọbụna ihe okike nke ndị na-agba LTE iji zute teknụzụ LTE Pro Advanced kachasị ọhụrụ yana ndakọrịta nke netwọkụ dị iche iche. Ọgbọ ndị na-adịbeghị anya nke ndị na-ahụ maka ụzọ ụgbọ okporo ígwè LTE Huawei na-eji nwayọọ nwayọọ na-eto site na ihe ndị ọzọ ejiji. Ihe kachasị mkpa bụ LTE Huawei Router site na Ethernet ọdụ ụgbọ mmiri & oghere kaadi SIM ma ọ bụ oghere LTE mkpanaka na-enye ntụkwasị obi siri ike na arụmọrụ kwụsiri ike maka ndị ahịa njedebe.
Akwụkwọ aka a na-ezo aka EchoLife HG520s Huawei rawụta, ka ga-emetụta ọtụtụ ndị Huawei rawụta na dum.
Gaa na rawụta adreesị IP na windo nchọgharị na nso nso a.
Rokpụrụ adreesị rawụta nke nhazi bụ 192.168.1.1.
Pịa Basic na aka ekpe aka ekpe.
Tinye Open DNS adreesị na Primary DNS Server na Secondary DNS Server ubi, wee pịa Nyefee bọtịnụ.
Naanị rịba ama ala ntọala DNS dị ugbu a tupu ịgbanwee mepee DNS, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịlaghachi na ntọala ochie maka ihe ụfọdụ.
Ozugbo ị hazi ntọala DNS gị wee pịa bọtịnụ Nyefee, anyị na-adụ gị ọdụ ka ị kpochapụ ihe ndozi DNS & ihe nchọgharị weebụ iji gosi na nhazi nhazi DNS kachasị ọhụrụ ga-arụ ọrụ ozugbo.
Ntuziaka Ntuziaka Nhazi
Nbanye na nhazi nke Huawei Router webpage site na ịdekọ IP na-esonụ n'ime igbe URL: 192.168.100.1. Nbanye nbanye bụ:
Na-agagharị na LAN> DHCP nhazi nke Server
Na-enyocha 'Na-enyere ihe nkesa DHCP aka'
Nyochaa Na-enyere DHCP L2 Relay aka
Nweta sava DNS:
Nke mere na ị nwere ike hazi rawụta maka OpenDNS, a na-atụ aro ka ị kpochapụ ihe ndozi DNS & ihe nchọgharị weebụ iji jide n'aka na ntọala nhazi DNS kachasị ọhụrụ na-arụ ọrụ ozugbo. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị nwere adreesị IP na-arụ ọrụ naanị gụọ isiokwu a ga - ewe gị site na otu esi emelite adreesị IP na - arụ ọrụ.
Naanị ịga na: http://www.opendns.com/setupguide/#results Nwalee usoro ntọala DNS na-adịbeghị anya.